बालुवाटार बोलाएर टोपबहादुरलाई ओलीको चेतावनीः मन्त्रीमा बसिरहन मन छैन ? - Jyotinews
'मन्त्रीबाट नै हटाइदिऊला नि ! काम गर्ने मन भए मैले र मेरा सहयोगीले भने अनुसार नै गर्नु।'
विशेष संवाददाता २०७७ फागुन ७ गते १६:३१
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा विभाजन भएपछि आफ्नो मूल घर छोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेका नेकपा पूर्व माओवादी नेताहरुलाई दिनप्रतिदिन सकस बढ्न थालेको छ ।
हाल नेकपा पूर्व माओवादी तर्फबाट नेताहरु राम बहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङ, प्रभु शाह आफ्नो मूल थलो छोडेर मन्त्री पदको लोभमा ओलीपक्षमा लागेका हुन् ।
तर बालुवाटारले उनीहरुलाई ‘बाल’ नदिदा सबै नेताहरुलाई सकस परेको छ । ओली पक्षमा लागेका एक मन्त्रीका निकट रहेका एकजना नेताले ज्योतिन्यूजलाई भने, ‘मन्त्री भएपनि ओलीले मन्त्रीको अधिकार पूरै दिएका छैनन, माननियहरुले भनेका कुराहरु बालुवाटारले सुन्दैन, ओलीपक्षका सामान्य नेताले पनि मन्त्रीहरुलाई गन्दैनन् ।’
अब कुरा गरौँ उर्जामन्त्री समेत रहेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको ।
नेकपा विभाजनसँगै उर्जामन्त्री रायमाझीले पाएका केही ट्यागहरु हुन् – ‘लालगद्धार’, ‘अवसरवादी’ । उनले गरेका हरेक भाषणहरुमा यसैप्रकारका कमेन्टहरु आउने गर्दछन् ।
एकदिन उनले अर्घाखाँचीमा पुगेर कुलामान घिसिङले गरेको कामको श्रेय आफू र प्रधामन्त्री ओलीलाई दिदै भने, विद्युत अन्डरग्राउण्डको काम गर्न लाग्या रैछन, कति साथीहरु मर्ने हुन् । त्यो उनको अबुझ भनाईसँगै उनी झनै विवाद र चर्चामा रहे ।
कुलमान घिसिङले बसालेको थिति र विधि भत्काउदै अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बालुवाटारको योजनामा काम हुन थालेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रतिगमनकारी समूह पूर्ण रुपमा अल्पमतमा परेपछि विभागीय मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई समेत थाहै नदिई आजभोली बालुवाटारको निर्णय हावी हुन थालेको छ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लोडसेडिङको समयमा उद्योगी, व्यवसायीले प्रयोग गरेको डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने निर्णय गर्याे।
लामो समयदेखि गुजुल्टिएको डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्दा पनि हुने भन्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय रहेको छ । निर्णय गरेर बाहिर निस्कदा ननिस्कदै विभागीय मन्त्री समेत रहेका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीलाई बालुवाटारबाट फोन आयो। फोनमा भनियो, ‘म विष्णु रिमाल बोलेको, प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नु भएको छ।’
उनले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय आफूलाई समेत चित्त नबुझेको र आफूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत त्यसबारेमा जानकारी गराएको रिमालले फोनमा नै रायमाझीलाई भने।
बालुवाटारबाट फोन आएपछि भात भान्छानै छाडेर उनी बालुवाटारतर्फ दौडिए। उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी तथा नेपाली सेनाका कर्मचारी समेत सँगै दौडिए। अधिकांश सुरक्षाकर्मी समेत आउट ड्रेसमा नै थिए।
यो पनि : मन्त्री क्वार्टरमा बादलको बिलौना – अदालतले बिताउँछ कि क्या हो ?
मन्त्री बालुवाटार भन्दै हिँडेपछि उनीहरु पनि जुन जुन अवस्थामा थिए, सोही अवस्थामा नै दौडिए। रातको झण्डै ९ बज्न लागेको बेला उनी बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्षालयमा रहेका रिमालले टोपबहादुरलाई देख्ने बित्तिकै सोधे–’उद्योगीलाई किन डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन बाध्य बनाउन खोजेको ?’
मन्त्री रायमाझीलाई उनले फेरी पनि हप्काए – ‘यस्तो हावादारी निर्णय गर्ने आँट कहाँबाट आयो ?’
रिमाल बोलीरहेको बेला नै प्रधानमन्त्रीका सहयोगी समेत रहेका राजेश बज्राचार्य आइपुगे।
उनले समेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको असहमतिका बीच यस्तो बेलामा किन निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रीलाई थर्काए ।
त्यसको जवाफमा मन्त्री रायमाझीले भने, – ‘होइन, होइन मिलाएर नै गरिएको छ। केही समस्या भएको भए पुनः बैठक बसेर सच्याउला नि !’
त्यसपछि उनी उनी प्रधानमन्त्रीको कोठामा छिरे ।
उनलाई देख्नेवित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने ? चुनावका लागि पैसा चाहिन्छ, उद्योगी व्यवसायीलाई किन डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको महसुलको विषय उठाएर भड्काउन किन खोजेको ? तत्काल निर्णय सच्याउनुस् ।’
रायमाझी बोल्न खोजिरहेका बेला ओलीले रोके र फेरी चर्किए, ‘जता पनि निहुँ खोज्ने काम गरेको छ । पहिले २०० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउन भनेको छ। कहिले डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको महसुलको विवादमा अनावश्यक चासो राखेको छ । किन यस्तो गरेको ? मन्त्री हुन मन छ कि छैन। छैन भने तत्काल राजीनामा दिएर जता मन लागेको छ। त्यतै जानु। होइन भने मेरो पारो तताउने काम नगर्नुस।’
ओलीले थर्काउने काम अझै बन्द गरेनन् । ‘मनलाग्दी निर्णय गर्ने होइन। मन्त्रीबाट नै हटाइदिऊला नि ! काम गर्ने मन भए मैले र मेरा सहयोगीले भने अनुसार नै गर्नु।’
यो पनि : प्रचण्डसँग वार्ता गरिरहेका दुई मन्त्री – गौरीशंकर चौधरी र मणि थापा ?
स्रोतका अनुसार त्यस दिन चन्दा उठाउने तयारी भइरहेको बेला टोपबहादुरले नै डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको महसुलको विषयलाई प्रवेश गराएको भन्दै आलोचना मात्रै गरिएन, मन्त्रीबाट नै हटाइदिने धम्की आयो।
ओलीको धम्कीपूर्ण व्यवहार देखेपछि निराश भएर रायमाझी मन्त्री क्वार्टर फकिए ।
ओली र उनका सहयोगीहरुकै दवावका कारण मन्त्री रायमाझी मात्र नभएर अन्य मन्त्रीहरु पनि ओलीकै कठपुतली भएर बस्न बाध्य छन् ।
यसैप्रसंगमा रायमाझीले आफ्ना निकटस्थहरुलाई भनेका थिए, ‘ओली कमरेडले जे कुरामा पनि अप्ठेरो पार्नुहुन्छ, केही राम्रो काम गर्न खोजेपनि उहाँहरुले गर्नै दिनुहुन्न, अझ ओलीजीको भन्दा उहाँका सहयोगीहरुको रवाफ चर्काे छ, कति दिनसम्म यसैगरी सहनुपर्ने हो ?’
स्रोतका अनुसार ओली पक्षमा लागेकोमा उनीलाई पछुतो लागिरहेको छ । ‘यता आएर उताका साथीहरुलाई भन्नु सम्म भनियो, यता पनि निको चाल छैन, बडो सकस पो भयो’ उनले भनेका थिए ।